Maitiro ekuita FaceTime kufona neApple kana Windows zvishandiso | IPhone nhau
Miguel Hernandez | 25/09/2021 10:00 | iOS, iOS 15, iPhone, Zvidzidzo uye zvinyorwa
FaceTime akagamuchira akawanda mashandiro nekuuya kweIOS 15 uye iPadOS 15, isu tinofungidzira kuti teleworking inosimudzirwa nedenda iri ine chekuita nazvo, kunyanya kana tichifunga nezvekuuya kwezvikumbiro senge Zoom izvo zvashandura nyika "inomira" yevhidhiyo mafoni kusvika ikozvino.
Imwe yemitambo mikuru yeFaceTime ine iOS 15 uye iPadOS 15 mukana wekufona zvakare neApple kana Windows zvishandiso zviri nyore. Tsvaga nesu kuti ungaita sei FaceTime kufona pakupedzisira nemunhu wese, zvisinei nekuti vane iPhone, Samsung, Huawei uye kunyangwe kubva paWindows.
Ichi chiitiko icho chatagara tichitaura nezvacho pane yedu YouTube chiteshi, mune edu iOS 15 matipi uye manomano vhidhiyo iwe unogona kuona maitiro ekushandisa zvakanyanya kuita uku kushanda. Chaizvoizvo kutaurirana nevashandisi veApple kana Windows kuburikidza neFaceTime zvinoshamisa kuti zviri nyore, chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuita kuvhura FaceTime uye pachiratidziro chemumba bhatani rinowoneka kumusoro kumusoro kuruboshwe rinoti: Gadzira chinongedzo. Kana isu tikabaya pane iri bhatani, iyo menyu iyo inotibvumidza isu kugovana FaceTime zvinongedzo nemaapplication akasiyana anozovhura.
Zvakare, pazasi chete isu tinowana icon iri girini iyo inoti: Wedzera zita. Nenzira iyi tinogona kuwedzera zita chairo kuFaceTime chinongedzo uye nekuita kuti zvive nyore kune vashandisi vanozvigamuchira kuti vazvizive. Tinogona kugovera chinongedzo cheFaceTime kuburikidza nekushandisa kukuru kwakadai seMail, WhatsApp, Teregiramu kana LinkedIn. Basa reAirDrop rinotombooneka mukati mezvinobvira, chimwe chinhu chisingambomira kundishamisa tichifunga kuti chakagadzirirwa zvigadzirwa zvisiri zveApple uye AirDrop haienderane neizvi.
Ndiko nyore kwazvo iwe kwaunogadzira musangano weFaceTime nechero mushandisi zvisinei nekuti vanoshandisa iOS, iPadOS, MacOS, Android kana Windows.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Maitiro ekuita FaceTime kufona neApple kana Windows zvishandiso
Musoro unofanirwa kuti:
«KuApple kana zvishandiso zveWindows»
"Nemidziyo yeApple kana Windows"
Izvi zvingave zvakanyanya kukodzera kune pfungwa yechinyorwa.
Apple Inoburitsa iOS 12.5.5 yeLegion iPhones uye iPads kugadzirisa Pegasus Kuishandisa